Jawaari oo maanta oo kale loo doortay Gudoomiyaha Baarlamaanka & Fashilka ku yimid Jadwalka | SMC
Home WARARKA MAANTA Jawaari oo maanta oo kale loo doortay Gudoomiyaha Baarlamaanka & Fashilka ku...
Jawaari oo maanta oo kale loo doortay Gudoomiyaha Baarlamaanka & Fashilka ku yimid Jadwalka
Doorashada Soomaaliya ayaa dib uga dhacday waqtigii horey loogu heshiiyay in ay ku qabsoonto, walina ma cada xiliaga ay bilaaban doonaan Doorashada Xildhibaanada labada aqal ee Baarlamaanka federaalka.
Jadwalo ay horey usoo saareen Guddiga Doorashooyinka lagu murasnsan yahay ayaa fashilmay , Xukuumada Soomaaliya ayaana marar badan ku cel celisay in doorashada si deg deg ah loo guda gali doono.
Afar sano kahor maanta oo kale 11-ka bisha Janaayo waxaa Gudoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka federaalka Soomaaliya loo doortay Prof Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo ka guuleestay musharaxiintii la tartantay.
Waxa ayna dad badan oo Soomaaliyeed filayeen in afar sano kadib maanta oo kale Soomaaliya yeelan doono Gudoon iyo Baarlamaabnka cusub, hasa ahaatee wali taasi ma muuqato waxaana wali shaqeenaya Gudoon iyo Baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday.
Doorashada Soomaaliya ayaa waxaa hada ka taagan khilaaf xoogan oo ka dhashay guddiga Doorashada oo u badan hal dhinac, waxa ayna Musharaxiinta Madaxweyne iyo maamul goboleedyada qaar kasoo horjeedaan sida dowlada u wado doorashada.